Dowladaha Ruushka, Iiraan iyo Turkiga Oo kulan looga hadlayo arimaha Suuriya ku yeeshey dalka Ruushka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dowladaha Ruushka, Iiraan iyo Turkiga Oo kulan looga hadlayo arimaha Suuriya ku yeeshey dalka Ruushka.
On Nov 23, 2017 254 0
Waxaa magaalada Sootshi ee koonfur galbeed wadanka Ruushka ku kulmay madaxda saddex dowladood oo faragelin ku haya dalka Suuriya ee muslimka ah, kuwaas oo kala ah Ruushka, Iiraan iyo dowladda cilmaaniga ee Turkiga.
Kulankan saddex geesoodka ah waxaa kasoo qeybgalay madaxda saddexda dowladood, waxaana shir gudoominayay dhiigyacabka Ruushka maamula ee kumanaanka Ruux ee muslimiinta ah ku laayay wadanka Suuriya Faladamir Butin.
Kalimaad wadajir ah oo madaxdaas ay ka jeediyeen dhamaadka Shirka waxay ku sheegeen iney isku afgarteen in la qabto kulan ballaaran oo ay isugu imaanayaan Nidaamka Bashaar Al-Asad iyo dhamaan kooxaha Mucaaradka ee diidan Nidaamka, kaas oo looga hadli doono sidii isbedel siyaasadeed looga sameyn lahaa dalka Suuriya.
Faladamir Butin ayaa sheegay in dhankiisa uu taageerayo soona dhaweynayo in Mucaaradka iyo Nidaamka ay wada hadlaan, islamarkaana ay gaaraan heshiis horseedaya in doorasho mdaxtinimo oo xalaal uu ku tilmaamay ay ka dhacdo dalka Suuriya.
Xasan Ruuxaani madaxweynaha dowladda shiicada ah ee Iiraan wuxuu dhankiisa sheegay in la isku afgartay in Taliyaasha ciidamada ee saddexda dowladood ay qabanqaabiyaan kulanka ay isugu imaanayaan Mucaaradka iyo Nidaamka Bashaar Al-Asad.
Rajab Dhayib Ordogan oo dhankiisa kulanka ka hadlay wuxuu ku nuux nuuxsaday iney isku afgarteen xoogana ay saari doonaan la dagaalanka waxa uu ugu yeeray Jamaacaadka Argagaxisada oo uu ula jeedo Jamaacaadka Jihaadiga ah ee u sacyinaya tadbiiqinta Shareecada Islaamka ee ka dagaallamaya wadanka Suuriya oo ah kuwa aad u farabadan.
Waa qeyb kamid ah kulamada shirqoollada ah ee loo maleegayo jihaadka todobo sana jirsaday ee ka socoda dalka Muslimka ah ee Suuriya, waxaana kacdoonkan Jihaadka isku bedelay uu soo billowday sanadkii 2011, kolkaas oo shacabka muslimka ah ee Suuriya ay ku kacdoomeen kaligii taliska ka arimiya Suuriya Bashaar Al-Asad.